Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug oo sheegtay in la bilaabay talaalka Xoolaha | Radio Muqdisho
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug oo sheegtay in la bilaabay talaalka Xoolaha
Published on February 3, 2013 by admin · 1 Comment · 770 views
Wasaaradda xanaanada Xoolaha Dhirta iyo daaqa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa sheegtay in maanta uu bilaabanayo talaalka Xoolaha ku dhaqan deegaanada hoos taga maamulkaasi.
Wasiir wasaaradda xanaanada Xoolaha Galmudug Axmed Cumar Maxamuud oo la hadlay Saxaafadda isagoo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa sheeyay in uu si rasmi ah u bilaawday olole lagu talaalayo xoolaha kaas oo lagu talaalidoono ku dhowaad kontontan kun oo neef.
Sidoo kale wasiirka ayaa intaasi ku daray in ololaha talaalka Xoolaha uu yahay mid ay la kaashanayaan hay’adda IRC uuna yahay mid xoolaha looga talaalayo cudurada kala duwan isagoona carabta ku dhiftay in wijigii koowaad uu yahay.
Dhanka kale wasiirka xanaanada Xoolaha Galmudug ayaa qeexay in uu socdo daraasaad ku aadan tacbashada beeraha si loo ogaado halka ugu nacfiga badan ee ku wanaagsan in la beerto.
Dadaaladan ay wado wasaaradda xanaanada xoolaha ee ku aadan talaalka xoolaha iyo daraasaadka beeraha ayaa ku soo aadeysa xili deegaano kale oo hoos taga maamulka Galmudug ay xoolo ugu dhintaan cuduro kala duwan oo ku dhaca.
rafiiq says:	February 3, 2013 at 6:30 pm	Masha allh ilahay halagarabgalo wasiirka iyo dadka gacanta kusiiyay waana ariin muhiim u ah galmudug iyo dadka soomaliyeed oo dhan xoolahooda